Tef Bvunzo | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Chitupa chepamutemo cheTCA Canada chinoratidza kugoverwa kwevazhinji module imwe neimwe inotorwa pamwe nekutsanangurwa kwakadzama pane hwakasiyana hunyanzvi uye inozivikanwa neC Citizenship uye Immigration Canada.
TEF Canada ine 4 module. Imwe module inogona kutorwa yakazvimirira.
Kana iwe uri kunyorera kuva vagari vemo, iwe uchada zvese zvinonzwisisika pamuromo uye kutaura kwemuromo pane B1 (yepakati) nhanho.
Kana iwe uri kunyorera yekugara zvachose muCanada, ese mana emamodule ebvunzo anodiwa.
Pasina mamiriro ezvinhu anogona BLI Québec inogona kuve nemhosva kana iwe ukanyoresa bvunzo dzisina kunaka.
Mumiriri ndiye mutoro wekusarudza ma module ese anodikanwa.
Ndokumbira kuti utibvunze usati wanyoresa kuti uzive kuwanikwa kwezuva rakasarudzwa, isu tine zvishoma pamwero wekuedzwa pazuva rekuyedzwa. Nzvimbo dzinochengeterwa pane yekutanga-kuuya, yekutanga-yakashandiswa sosi.
Iko kunyorera uye kubhadhara kwemari yekunyoresa kunofanirwa kuitwa vhiki mbiri pasati yasvika bvunzo.
unofanirawo Verenga mamiriro ekunyoresa usati wanyoresa. Nekusayina fomu rekunyoresa, unogamuchira aya mamiriro.
Paunenge iwe wasimbisa zuva rakasarudzwa rinowanikwa
Dharira uye upedze TEF kunyoresa fomu. Dzvanya apa kuti utore
Zadzisa iyo online kunyoresa fomu uye ita muripo. (Iwe unozofanirwa kurodha fomu rakanyoreswa reTEFAQ fomu uye kopi yepasipoti yako kana kadhi rako rekugara zvachose.
Kunyoresa kwese kunoitwa online
Ndapota tarisa sarudzo yako yemamodhesiti usati wanyoresa sezvo pasina mari dzinodzoserwa.
Hapana shanduko dzinobvumirwa.
Vavhoti vanofanirwa kuremekedza mwaka wekumirira-mwedzi mumwe chete pakati pemazuva ebvunzo. Kana iyi nguva yemazuva makumi matatu yekumirira isina kuremekedzwa, mari yekubvunzira ichazoraswa sezvo kuchange kusisina mari kana shanduko.
Mushure mekunyoreswa kwako
Tinokutumira tsamba yekusimbisa neemail. Izvo zvakakosha kuti usvike pakati pegumi nemaminetsi gumi nemashanu nguva isati yaratidzwa mutsamba yako. Hapana anonoka kusvika anogamuchirwa.
Ndokumbirawo kuti muverenge uye rodha bhuku remunyorwa.
Ndokumbira umire kune kero / kero dzakaratidzwa mutsamba yako yekusimbisa:
Pazuva rebvunzo, unofanirwa kuunza magwaro anotevera kwauri:
Tsamba yekubvumirana kwekukoka yakatumirwa nemuzinda
Pasipoti inoshanda (kana ID ine mufananidzo uye siginicha)
Ndapota cherekedza kuti panogona kunge paine nguva dzekumirira pazuva rebvunzo. Ronga kushandisa zuva rizere panzvimbo, kubva 9:00 am kusvika 5:30 pm, kana zvichidikanwa.
Nguva Yakare: 40 maminitsi
Iyi module ine mibvunzo makumi matanhatu inoverengeka yesarudzo.
Zvichayedza kugona kwako kunzwisisa chiFrench chinotaurwa mumamiriro ezvinhu ehupenyu chaihwo seizvi:
zvinotora kubva kumapurogiramu eredhiyo
kuzivisa pachena, nezvimwe.
Nguva Yakare: 15 maminitsi
Iyi module ine 2 Zvikamu
Chikamu A: Iwe uchafanirwa kuunganidza ruzivo uye kubvunza mibvunzo.
Iyo inoidza kugona kwako kutaura muFrench mumamiriro ezvinhu ehupenyu chaihwo kuburikidza nemitambo-yemitambo
Nguva Yakare: 60 maminitsi
Iyi module ine zvikamu zvina nehuwandu hwemakumi mashanu emubvunzo
Chikamu A: Ndiani, chii, kupi uye kupi uye nei
Chikamu B: Nzwisisa zvinhu
Chikamu C: Nzwisisa zvinorehwa nerugwaro
Chikamu D: Kunzwisisa pfungwa yakajairika yerugwaro
Inozoedza kugona kwako kunzwisisa zvinyorwa zvakanyorwa muFrench
Iyi module ine 2 Zvikamu.
Chikamu A: Verenga kutanga kwechinyorwa chedhiyo uye wobva waenderera nenyaya yacho.
Chikamu B: Taura zvaunofunga uye shandisa nharo kuzvidzivirira.
Inozoedza kugona kwako kunyora zvinyorwa muFrench